Khayre Oo la kulmay Gudiga Amniga iyo iyo siyaasada ee Midowga yurub – Daily Som
Khayre Oo la kulmay Gudiga Amniga iyo iyo siyaasada ee Midowga yurub
By Staff on May 3, 2018 No Comment
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali khayre ayaa magaalada Brussels kula kulmay Gudiga Amniga iyo Siyaasada ee midowga yutub kuwas oo ay ka mid ahaayeen Gudiyo iyo safiiro si toos ah uga jawaabaya Wasaaradaha Arimaha Dibada ee dalalka uu ka kooban yahay midowga yurub.
Ra’isul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor akhriyay Gudiga Siaasada Xukuumadiisa ee ku aadan Amaanka iyo siuyaasada Soomaaliya asiga oo ka warbixyay xaalada uu dalka ku sugan yahay.
Wakiilada Midowga yurub ee ku sugnaa shirka ayaa soo dhaweeyay qorsha Xukuumada iyaga oo tilmaamay in ay taageersan yahiin qaabka ay wax uwado Xukuumada Cusub ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen in ay la garab istaagi doonaan taageero mug leh.
sidoo kale Qodobada ugu xasaasiyadsan ee shirka ayaa waxaa ka mid ahaa in Dowlada Soomaliya €100 oo ah lacagta yurub taas oo si toos ah loogu shubayo qasnada Dowlada Fedaraalka.
Midowga yurub ayaa haatan ku bixiya Ciidamada Amisom lacag gaaraysa €80 milyan oo euro si gacan ooga gaysto howlaha Nabadaynta Soomaaliya.
Xukuumada Khayre ayaana wadata qorshe ah in hadii ay gacanta ku dhigaan €100 miyan ay wax ka qaban doonaan Howlgalada Xasilinta Dalka, waxaa laga dhowlr sugayaa in ay ansixiyaan Dabayaaqada Bishan May ururka Midowga yurub.
Khayre Oo la kulmay Gudiga Amniga iyo iyo siyaasada ee Midowga yurub added by Staff on May 3, 2018